Nandritra iny diany tany Genève iny dia nihaona ihany koa tamin’ny chancelière Allemande Angela MERKEL ny filohan’ny repoblika Andry RAJOELINA. Sehatr’asa maro no niarahan’izy ireo nidinika tamin’izany toa ny angovo, ny tontolo iainana ary ny fampianarana.
Mitovy ny fijery ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina sy ny filoha vaovaon'ny vondron'ny banky iraisam-pirenena David Malpass ny amin'ny momba ny fampandrosoana an'i Madagasikara. Nanamafy ny fanohanany ireo fandaharan'asan'ny fitondrana ankehitriny ny filohan'ny banky iraisam-pirenena taorian'ny nahitany ny momba ireo zava-misy eto Madagasikara sy ny tetik'asa napetraky ny filoham-pirenena hanatsarana ny fiainan'ny Malagasy ao anatin'ny IEM.
Feno zato andro ny 28 aprily no nitantanan'ny filohann'y repoblika Andry Rajoelina ny firenena. zato andro niasa ho an'ny vahoaka Malagasy. Nanao ny tatitry ny zava-bita nandritra io ampaham-potoana io ny filoham-pirenena tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fantanjahan-tena, nanehoany tamin'ny vahoaka Malagasy ireo zava-bita ary koa nizarany ny zava-misy marina eto amin'ny firenena araka ny fametrahana ny mangarahara efa nolazainy. Nanehoan'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina indray ny fahavonony hatrany hanavotra ny firenena miaraka amin'ny vahoaka Malagasy ka nanavaozany ireo velirano nataony io fotoana io.
Nambaran'ny mpitondra tenin'ny governamanta, ny minisitra Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, ny 23 aprily, fa ho fanatanterahina ny velirano nifanaovan'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina tamin'ny vahoaka malagasy no hanatanterahina fitsapakevibahoaka.
Misy ny fikonokononana fanonganana ny filohan'ny antenimieran-doholona Rivo Rakotovao amin'izao antsaky ny volana aprily izao. Araka ny fantatra, efa misy ny fanangonan-tsonia ataon'ireo loholona ho fangatahana ny fanatanterahina fivoriana tsy ara-potoana.
Efa nisafidy tamin’ny alalan’ny fifidianana ny Filoha Macky Sall ny vahoaka senegale ny hanohizana ny vinan'asa, “Plan Sénégal Emergent” na PSE. Tao anatin'ny 5 taona dia niova tanteraka i Sénégal.